Iran oo weerar diyaarado drone ku qaaday saldhig ay ciidamada Mareykanka ku leeyihiin koonfurta Syria | Dayniile.com
Home Warkii Iran oo weerar diyaarado drone ku qaaday saldhig ay ciidamada Mareykanka ku...
Iran oo weerar diyaarado drone ku qaaday saldhig ay ciidamada Mareykanka ku leeyihiin koonfurta Syria
Iran ayaa ka dambeysay weerar loo adeegsaday diyaarado drone ah oo toddobaadkii tegay lagu qaaday saldhig ay ciidamada Mareykanka ku leeyihiin koonfurta Syria, waxaa sidaas sheegay saraakiil Mareykan ah.
Mareykanka ayaa rumeysan in Iran ay ka shaqeysay oo ay dhiirigelisay weerarka balse aysan diyaaradaha ka soo duulin Iran. “Waxay ahaayeen diyaarado Drone oo Iran ay leedahay,” ayuu yiri sarkaal Mareykan ah.
Previous articleWasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliya Oo Shir Ka Furtay Muqdisho
Next articleAbaarta ka jirta Waqooyi Bari Kenya oo halis ku ah nolosha aadanaha iyo Xoolaha
Shiikh Shariif isagoon lagu muransaneyn inuu mucaaradyahay iyo inuu muxaafad yahay ayaa waxaa habeen la fariistay Fahad Yasiin intuusan Ikraan Qalan. Wuxuu ku yiri Shariifow...
Hay’adda socdaalka aduunka IOM oo sheegtay in 75 tahriibayaal ah ay...
Dhulka dowladda ee la degan yahay mala xisaabiyay mise Dayniile iyo...
Jaamacadda Carabta oo ka digtay in khilaafka Rooble & Farmaajo ka...